Xildhibaan Dalxa oo ku baaqay in la Joojiyo Colaada ka taagan gobalka Sool. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAXildhibaan Dalxa oo ku baaqay in la Joojiyo Colaada ka taagan gobalka Sool.
Xildhibaan Dalxa oo ku baaqay in la Joojiyo Colaada ka taagan gobalka Sool.
January 11, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xubnaha barlamaanka soomaaliya oo lahadlay KNN ayaa maamulada Puntlan iyo Soomaaliland ka dalbaday inay inay joojiyaan abaabulka dagaal ee ka socda Deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool, halkaas oo dhawaan ay ku dagaalameen ciidamo kala taabacsan maamuladaasi.
Labada dhinac ayaa midba mid kale ku eedeeyay in uu duulaan soo qaaday, ayadoona deegaankaas isla markaana mas`uuliyadeedana uu qadayo.
Xildhibaanka ayaa beesha Caalamka ugu baaqay inay Qeyb ka qaataan Xasilinta Colaada ka Soo Cusboonaatay Degaanka Tukaraq ee gobalka Sool.
Degaanka Tukaraq ee gobalka Sool ayaa dhawaan Waxaa ku dagaalamay Ciidamo kala Taabacsan Maamulada Puntland iyo Soomaaliland,maadaama Ciidamo ka tirsan Soomaaliland ay Weerar kula wareegeen Degaankaasi.
DHAGEYSO:-Xilhibaan Daahir Amiin jeesow oo Taageero u muujiyay militiriga Somalia ee gobalka Hiiraan.
WAR-SAXAAFADEED:-Golaha Iskaashiga M/Goboleedyada Oo Kasoo Hor jeystay in dib loo dhigo doorashada kuraas ka banaan Golaha shacabka.
48,187 total views, 169 views today
48,187 total views, 169 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
48,259 total views, 169 views today
48,259 total views, 169 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
48,269 total views, 169 views today
48,269 total views, 169 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
48,291 total views, 169 views today
48,291 total views, 169 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
48,326 total views, 169 views today
48,326 total views, 169 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]